ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဒုက္ခဘုံမှာ နေဖူးသလား”
ရန်ကုန် ရန်ကုန် ကျတော့်အတွက်တော့ .....
အကြံကုန်ရင် ဆားပြန်ချက်မဲ့မြို့ပေါ့ ......
ရေလျှံ မီးပြတ် နေစရာကျပ်တဲ့ ရန်ကုန် .....
နေဝင် ညဘက် ကြက်မ စည်တဲ့ ရန်ကုန် .....
ရေမလာ ပိုက်ပျက် ရေမလောက်တဲ့ ရန်ကုန် .....
လေမဝင် အမှိုက်နဲ့ အသက်ရှူ မဝတဲ့ ရန်ကုန် .....
ဒဏ်ရာ အပြည့်နဲ့ သေတော့မယ့် ရန်ကုန် ......
ကြံရာမရ ရင်တော့ ပြန်လာရမဲ့ ရန်ကုန် ......
နင့်ကြောင့် ခက်တယ် ရန်ကုန် .......
ကယ်သူမဲ့ပြီး အရှက်ပါကွဲပေါ့ ရန်ကုန်ရယ် ....
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ ရေနံထွက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ ထပ်ဖြည့်ရရင် ကောင်းမလားလို့ ......
မောပါလား ကိုပေါရေ ..း(((
အဲဒါ Forbidden City လို့ပြောင်းရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်မှာ လ က သာနေအုံးမှာပဲလေ။
ရန်ကုန်တော့ ကုန်ပါပြီလေ။ တကယ် နှမြောမိတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အကြောင်း သတင်းတွေ ဟိုဟို ဒီဒီကြားပါတယ်။ ကိုယ်ကြီးပျင်းလာတဲ့မြို့ ကျင်လည်ကျက်စားခဲ့တဲ့မြို့ ဆိုတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
That isaway of junta's trick.They want people migrate to capital so called naypyidaw.
ှကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်- မင်းတို့ Singapore မှာပျင်းစရာကြီးကွာတဲ့၊ ငါတို့မြန်မာပြည်မှာ ပျော်စရာတွေပေါတယ်တဲ့။ တို့ကိုအစိုးရက ခဏခဏပျော်ရအောင်ပျော်စရာတွေဖန်တီးပေးထားတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အံ့သြသွားတယ်- ဘာတွေလဲဟ ဆိုတော့။ တို့မှာ မီးလာရင်လည်းပျော်ရတယ်-အထူးသဖြင့် ကိုရီးယားကာလာခါနီးမီးလာရင်ပိုပျော်ရတယ်၊ ရေလာရင်လည်းပျော်ရတာပဲတဲ့၊ နောက်ဆုံးဖုန်းလေးကိုင်လိုက်လို့ လိုင်းဝင်နေရင်လည်း ပျော်ရတာပဲတဲ့။ Bus ကားစီးလို့ လူချောင်ရင်လည်းပျော်ရတယ်တဲ့။ ကဲဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းသလဲ။
ဘာပဲပြောပြော အချိန်တန်ရင်တော့ ရန်ကုန်ကို တနှစ်တခါ ပြန်ချင်နေတာပါပဲ။ တနှစ်စာ ပိုက်ဆံလေးစုပြီး ကျမ အခွန်ဆောင်ခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့ ပုံစံလေးကို သွားဖြည့်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေရတော့တာပါပဲ။ :P
စိတ်ပျက်စရာကောင်းပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘုရားဝန်းတွေရှိတဲ့ရန်ကုန်..
ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဝေ နေပေမယ့် ကူညီတတ်တဲ့ ရိုင်းပင်း တတ်တဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေရှိတဲ့ရန်ကုန်...
ဒါတွေရှိနေသ၍ ဒီမြေကိုတခြားမြေတွေနဲ့မလဲနိုင်သေး ပါဘူး ရန်ကုန်..
တိုက်ဆိုင်လို့ဘလော့ဂ်တခုမှာ နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျားပေါက်ရဲ့ "အရင်အတိုင်းရန်ကုန် "
(တကယ့်ကို အတွေးအားကောင်းကောင်း အနုပညာအားကောင်းကောင်း နဲ့ရေးစပ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ထင်ဟပ်စေတဲ့သီချင်းလေးပါ..)
"ကျနော်တို့တတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ရောက်နေပေမယ့် အဲဒီ ဒုက္ခမြို့တော်ကြီးမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ ကျောင်းနေဖက်တွေ ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးအခုလို ဖြစ်ပျက်နေတာကို မြင်ရတဲ့ လူတိုင်း စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ကြတယ်။"
စိတ်နဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ စာသားလေးပဲ... ဟုတ်တယ်.. နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ အရင်းအနှီး မတတ်နိုင်တဲ့ ပညာတတ်လူငယ် သူငယ်ချင်းတွေ ကျန်နေသေးတယ်..
"ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျသွားလို့ ပြည်သူ့အစိုးရတရပ်တက်လာရင်တောင် ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရော၊ တတိုင်းပြည်လုံးကိုပါ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားယူရလိမ့်မယ်။"
Can't agree no more!
ဒီရက်ပိုင်းကပဲ..စလုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက် ခရစ်ယာန်အဖွဲ.နဲ ထင်ပါရဲ့..ရန်ကုန်အလည်သွားတာ....
ကိုယ်ရဲ့မြို့ ကြီးကိုဝေဖန်သွားလိုက်တာ..... လမ်းတွေဆိုးလိုက်တာတဲ့..
ကိုယ်လည်း မကျေမနပ်နဲ မေးရတယ်..ရွေတိဂုံဘုရားကြီးလေ..မရောက်ဘူးလားပေါ့..
shopping center တွေလည်းအများကြီးလေ..
ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများက အဲဒီရန်ကုန်ကိုပဲ စိတ်လိုလက်ရ ပြန်ချင်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား
ဟ.. ပြန်ချင်တာပေါ့ကွ ကို့နေခဲ့တဲ့နေရာပဲ ကိုချစ်တဲ့နေရာပဲ အသုံးမကျတဲ့ အစိုးရကြောင့် လုပ်စားလို့မဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားထွက်လာရတာ ကို့နိုင်ငံပဲကိုယ်နေချင်တာပေါ့ ...
ကိုပေါ အသစ်မတင်သေးဘူးလား။ Link ထားပေမယ့် တခါတလေ မ၀င်ပဲ ဖြစ်တတ်လို့ မကြာခဏ လာကြည့်တယ် အသစ်များ တင်ထားလားလို့။ ကျွန်မတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ရန်ကုန်လည်း တခါမှ မရောက်ဖူးဘူးဆိုတော့ လွမ်းရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး။ ဒါပေယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက မြို့တော်ကြီးတခု အခုလို ဖြစ်နေတာ ကြားရတာ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ပျော်စရာတွေများလို့ပါ။
မီးလာလည်း ဟေးမီးလာပြီဟေ့လို့ ပျော်ရ
ပျော်စရာတွေ ဒီလောက်များတာ ဂုဏ်ယူရမှာပေါ့
ပျော်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ န.အ.ဖ စစ်တပ် သေနတ်နဲ့လိုက်ပစ်လို့ထွက်ပြေးရတဲ့ အုပ်စုထဲမှာ ကိုယ်ပါပြီး အဖမ်းလဲမခံရ... ဒဏ်ရာလဲမရ လွတ်လာရင် ပိုပြီးတော့တောင် ပျော်ဖို့ ကောင်းသေး..
ဟုတ်တယ်...ဘတ်စ်ကားစီးရင်း သတိထားမိလာတာက လူတွေဟာ ရုန်းရင်းကန်ရင်း ရလာတဲ့ ထိုင်ခုံတစ်နေရာအတွက် အတ္တပိုကြီးလာ ကြတယ်... မီးလာတဲ့အချိန်မှာ အလုအယက် ရေတင်ကြတယ်..။ တစ်စီးလွတ်ရင် မကြာခင် နောက်တစ်စိးလာလိမ့်မပေါ့ဆိုတဲ့ အာမခံချက်မျိူး မရှိတဲ့အတွက် မှတ်တိုင်မှာ ထိုးရပ်တဲ့ကားကို မမီမှာစိုးလို့ အမောတကော ဖိနပ်ပြတ်မတတ် ပြေးလိုက်ကြတယ်... စိတ်အေးချမ်းမျူ ဆိုတာ ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်နေပြီ။ .... သြော် ဒုက္ခ ရန်ကုန်....ဒုက္ခ... ရန်ကုန်...။
အော်..ကိုပေါရယ်..ရေမလာမီးမလာ လမ်းပျက်တာလေးများ စကားလုပ်ပြောလို့ဗျာ.
ဒီထက်မကပျက်နေတာ အားကြီး အပျက်ခြင်းပြိုင်ဘယ်သူနိုင်ပါ့မလဲ ရုပ်ရှင်တောင်ရိုက်လို့ရသေး..မီးလာရင်လည်းဝမ်းသာရ
ထီပေါက်သလိုဖြစ်ရ အဲ့ဒီတရုတ်အားကိုး ရုရှားအားကိုး ဟိုအားကိုး ဒီအားကိုး ဟိုမျက်နှာချိုသွေး ဒီမျက်နှာချိူသွေး အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေကလည်း တမျိူး အကောင်းကိုမမြင်နိူင်ဘူး.ဟော ၀န်ထမ်းတွေကြည့်လခနဲ့ မစားလောက်တော့ ကြိုက်သလိုတောင်းယူလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတောင်ပေထားသေး နောက်ခေတ်မှီဖွံဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နေပြည်တော်ကြက်ပြေးကို ရုံးကိစ္စလာရတဲ့သူတွေက မစောင့်နိုင်တော့ တောင်းသလောက်ပေးရတော့လည်း ပိုရသေး..ချောက်ကမ်းပါးထဲကျတော့မဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးထဲက လူနည်းစုလေး ကောင်းစားလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာ လူများစုကြီး လုပ်မပေးနိုင်တာနဲ့စာရင်တော်သေး..
ပြေးဒေါင်းကတော့ အဲ့လိုပြောတတ်တာကို လူအခွင့်ရေးသမားကြီးတွေက ရန်သူ့လူဆိုပြီးကျင်းထဲထည့်ထားမှာစိုးလို့..ပြေးပြီဗျာ..
i just want to know singapore rule & regulation for downloading movies,music from Rapidshare,Megaupload...ကိုပေါက ရှာရှာဖွေဖွေ သိတတ်လွန်းလို့မေးတာပါ.. အဲ့ဒိလို လင့်ခ်တွေက ဒေါင်းလုပ်ချရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပညာပေးသဘော ဆောင်းပါး တပုဒ်လောက် ရေးပေးပါလား ဗျာ..